घरज्वाइँलाई छोराको नागरिकता दिदा यस्तो पर्यो आपत ! वडा सदस्य, पूर्वअध्यक्ष र सचिवसहित ८ जना पुलिसको खोरमा::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
घरज्वाइँलाई छोराको नागरिकता दिदा यस्तो पर्यो आपत ! वडा सदस्य, पूर्वअध्यक्ष र सचिवसहित ८ जना पुलिसको खोरमा
पोखरा– मोरङका मिलन परियार कास्कीका धनजीतका ज्वाइँ हुन् । उनी विदेशमा भएका बेला जेठी श्रीमती मनकुमारीले जेठी छोरीको बिहे मिलनसँग गरिदिएका थिए । तर, उनै ज्वाइँले सासुसँग मिलेर छोराको नागरिकता लिएको खुलेको छ ।
नक्कली नागरिकता लिने मिलनसँगै सांक्षी बसेका वडा सदस्य, पूर्व अध्यक्ष, तत्कालीन वडा सचिव, सहित पक्राउ परेका ८ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
मिलन र मनकुमारीसँगै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १० का सदस्य सम्मरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्ववडाध्यक्ष मनवीर गुरुङ, तत्कालीन वडा सचिव नवराज थापासहित ८ जना पक्राउ परेका हुन् ।
आफ्नै जेठी श्रीमती मनकुमारीको सहयोगमा ज्वाइँले नक्कली नागरिकता बनाएको भन्दै उजुरी दिएका थिए । २०७० साल पुस १७ गते मीलनले झुठो विवरण बुझाएर नागरिकता बनाएको भन्दै उनले श्रीमती र मीलनविरुद्ध उजुरी दिएका थिए ।
‘झुठो विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको भन्दै उजुरी परेपछि अनुसन्धान थालिरहेको थियो’ कास्की प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी खड्कबहादुर खत्रीले मिडिया डबली संग भने, ‘उनीहरुलाई अदालतबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।’
मिलनले अंश मागेपछि उनले यो थाहा पाएका थिए ।